संक्रमण बारे फेरी पुनः नेपालमा आयो डरलाग्दो अपडेट ! - jagritikhabar.com
संक्रमण बारे फेरी पुनः नेपालमा आयो डरलाग्दो अपडेट !
नेपालमा पछिल्लो केही दिनयता संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो हप्ताको तुलनामा एक हप्तामा नेपालमा संक्रमणदर ०.९ प्रतिशतले बढेको छ । एक हप्तामा पीसीआर परीक्षणबाट देशभरबाट दुई हजार २३९ जना . संक्रमित थपिएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै एन्टिजेन परीक्षण गर्दा २०९ जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयको तथ्यांकामा उल्लेख गरेको छ।